IHayloft - I-Airbnb
IHayloft iguqulwa isuka kwibhari yenkulungwane ye-17 enesilingi eziphakamileyo kunye neendonga zamatye eziveziweyo. Inebhedi elingana nenkosi kwaye ixhotyiswe nge-ceramic hob, i-oveni, ifriji, ifriji, imicrowave, iwasha / isomisi, iTV enemibala, iDVD / iCD player, isicoci sevacuum, ukufudumeza okuphakathi kunye neshawa yamandla phezu kwebhafu. Ilinen kunye neetawuli zibandakanyiwe. Ulala abantu ababini. Ibhedi encinci yesofa, kwigumbi lokuphumla, inokulala umntu wesithathu ( kukho intlawulo eyongezelelweyo ye-£ 10 ngobusuku xa ilinen eyongezelelweyo ibonelelwa kwibhedi yesofa.
4.95 · Izimvo eziyi-84
I-Redmain yindawo yasemaphandleni enoxolo, ebekwe ngaphakathi kweLake District Park, iimayile ezimbini ukusuka kwidolophu yentengiso yaseCockermouth kunye neekhilomitha ezilishumi ukusuka eKeswick. Unxweme lwaseSolway olunolwandle olude olunesanti kunye nokuhamba okuhambayo kukuhamba ngemizuzu elishumi kuphela ukusuka eWindermere kwaye i-Ambleside ingaphantsi kweyure yokuqhuba, kwaye unokuba seSkotlani ngaphakathi kweyure.
IHayloft ijonge kwingca
I-Redmain House yaqala nge-1690's kwaye yindlu ende yaseCumbrian enezitena zamatye ezincanyathiselwe apho indlu yeeholide iguqulwe yaba kumgangatho ophezulu, ngelixa igcina izinto ezininzi zantlandlolo.
Kufutshane namanye amachibi aseNtshona anezona ndawo zinomtsalane-iSkiddaw, iGrassmoor, iRed Pike, iHigh Stile kunye neGrisedale Pike. Amachibi aseNtshona aquka iLake iBassenthwaite eneSailing Club kunye neOsprey view point, iLoweswater yokukhwela nokuhamba, iDerwentwater yokukhwela inqanawa, ukukhwela isikhephe kunye nokutsiba-tsiba kwesiqithi, iButtermere yokuhamba kunye nobuhle obugqithisileyo kunye neCrummock Water. Ubucwebe kwisithsaba sasendle yi-Ennerdale, ukukhwela ibhayisekile okugqwesileyo kunye nokuhamba kwaye umke kwizihlwele kunye nekhaya ukuya kwiPillar Rock edumileyo kunye neSteeple. Ukuba awukuthandi ukuhamba iinduli ezinkulu thatha ixesha lokundwendwela iSolway Coast, indawo enobuhle bendalo obubalaseleyo, eneelwandle ezinde ezinesanti kunye neembono ezintle ngaphaya kweSolway Firth ukuya kwiiNduli zaseScottish.
Njengoko singabanikazi babahlali, sihlala sikhona ukunika uncedo kunye nesikhokelo kwiindwendwe. Nangona kunjalo, sikwathanda ukuhlonipha imfihlo kunye nokuzimela kweendwendwe zethu ezinenkululeko epheleleyo yokuza nokuhamba njengoko kufuneka.
Njengoko singabanikazi babahlali, sihlala sikhona ukunika uncedo kunye nesikhokelo kwiindwendwe. Nangona kunjalo, sikwathanda ukuhlonipha imfihlo kunye nokuzimela kweendwendwe zeth…